Dashain Special - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
खुसी खोसिएको दशैं
रेखाकुसुम रेग्मी -
रेगन र रोहनलाई दशैँ सिकाउन दशैं मनाउनु छ मलाई। दशैं पढाउन दशैं मनाउनु छ मलाई। घटस्थापनाको दिन पहिलोपल्ट अक्षता र फूलले पूजा गर्न सिकाउँदा कति रमाएको थियो रेगन। अब उस्को खुसी देख्न पनि मनाइदिनु छ मैले दशैं। मामालाई चिनाउन पनि मनाइदिनु छ मैले अब। मेरो च्यात्तिएको खुसीमा उनीहरुका खुसीका रंगहरु मार्न पाउँदिन । रंगहीन दशैंमा खुसीका रंगहरु खोजिदिनुछ मैले अब।
जुवा, तास र अति खानपिनको दशैं कहिलेसम्म?
डा. राजु अधिकारी, काठमाडाैं असोज २६ -
महात्मा बुद्धले एकपटक जीवनलाई सेलिबेस गर अर्थात् विवेकपूर्ण संयततायुक्त जीवन बाँच भनी उपदेश दिएछन्। केही समयपछि शिष्यहरूले आफ्नो स्वार्थ र मस्तीका लागि बुद्धले सेलिबेट हैन, सेलिब्रेट भनेका थिए भनेर व्याख्या गरेछन्। बुद्धका शिष्यहरूको पालो–परम्परामा सिनियरहरूले भनेपछि कनिष्ठहरूले त्यसलाई सत्य भन्ठान्नै पर्‍यो।
काठमाडौँ,असोज २५ -
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज देवी विसर्जनको साइत बिहान ८ बजेर २५ मिनेटमा रहेको जनाएको छ । टीका प्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने ८ बजेर ४५ मिनेटको साइत उत्तम रहेको अध्यक्ष एवम् धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई बताए ।
काठमाडौँ, असोज २४ -
आज दसैँको महाअष्टमी पर्व
काठमाडौँ, असोज २३ -
आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाष्टमी पर्व आज नेपालीले बडादसैँका रुपमा दुर्गा भवानीको पूजाआजा गरी भव्यताका साथ मनाउँदैछन् ।
बडादसैँको आठौँ दिन आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाआजा गरी मनाइन्छ । महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्व रहेको छ । आजको दिन शास्त्रसम्मतरुपमा दसैँघर, कोतलगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशुबलि दिई दुर्गा भवानीको विशेष पूजाआजा गरिन्छ । दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्देवीभागवत र देवीस्तोत्र पाठ गरिन्छ ।
अझैपनि तानेरै बिहे, गाउँ फर्कन डराउँछन् चेली
काठमाडौं, चैत ३७ - हिमालपारिको गाविस बिही–९ ड्याङकी २४ वर्षीया युवती हुन् पेमा लामा । उनी अहिले मानसिक तनावमा छिन् । वैदेशिक रोजगारीमा पाँच वर्ष लेबनान बसेर फर्केकी उनलाई युवा समूहले राति जबरजस्ती घरबाट तानेर लगी दुईजनाको पत्नी भएको घोषणा गरिएको छ। यो त्यहाँको सामाजिक परम्परा भए पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार्न मन तयार छैन। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
घरमा आएर नि मनमा नआएको दसैं
गीता चिमोरिया, - मेरा नेताहरुले मधेसमा झनै समस्या थपिदिए। भारी बोकेर बिहानबेलुकी हातमुख जोड्नेहरुलाई भारी बोक्न पनि दिएनन्। दुईचार हजारको व्यापार व्यवसाय सुरु गरेकाहरुलाई गरीखान दिएनन्। मधेसले खोजेको यस्तै हो त? जवाफ दिनुपर्छ नेताहरुले। यदि मधेसी नेताहरु साँच्चै मधेसको हितका लागि आन्दोलनमा छन् भने, भोलिबाटै फिर्ता लिऊन्, यो बन्द र हड्ताल। सुरु गरुँन्, नयाँ तरीकाले दबाबका कार्यक्रमहरु। मधेसीको अधिकार मात्रै होइन, नेपालीको अधिकारका लागि लडून्, एकजुट भएर। उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो तराईको मात्रै होइन, नेपालकै नेता भएको हेर्न मन छ मलाई।
प्रकाश आस्था - बाख्राका पाठासँग कम रमाउँथेन प्रजित । एकचोटि बाख्रो गोठालो जाँदाको याद आयो । बाख्रालाई हिउँदका खालि खेतमा छोडिदिएर कट्टु फुकालेर फलाँखुमा उ छिर्यो । उसलाई त्यतिखर पौडी खेल्न उति आउँदैनथ्यो । मसानेको दहमा ऊ विस्तारै डुब्दै गयो । खुट्टा तल गाडिए । आत्तिएर बक नै फुटेन । जाङ्बुले देखेछ । हत्तपत्त आएर कपाल तान्दै बाहिर निकाल्यो । भन्यो, ‘झन्डै खुस्किनस्, स्साले ।’
‘नमुछे आमा दहीमा टीका'
ज्योति देवकोटा - मैले जान्ने भएदेखि मुश्किलले दुईवटा दसैं ‘दसैं’का रूपमा मनाएँ हुँला। बाँकी सबै दसैं देखेको मात्र छु। दसैं मनाउनु र देख्नुमा फरक छ। पहिलोपटक दसैं मनाएको झलकमान गन्धर्वको गीत सुन्दै परालको दाइँ हालेको वर्ष नै हो। ‘ठूलो भएस्’ भनेर बाले लगाइदिएको टीकाको अर्थ यत्तिसम्म बुझेँ– म सानै छु, बा म चाँडै ठूलो भएको हेर्न चाहनुहुन्छ।
दिनेश दिपु सुवेदी - राजधानीहुँदै जिल्लास्तरमा बसेर चौबीसै घण्टा दौडधुपमा व्यस्त पत्रकार अनि तिनको दसैँबारे सधैँ सबै मौन। धेरै त थाहा छैन, धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले र अहिलेका महेन्द्र बिष्टले भोट माग्दै गर्दा खोकेका आश्वासनका मिठाभित्रका नमिठा वाक्य अहिले पनि धेरैको कानमा गुञ्जिरहेको छ। सबैलाई सबै थाहा छ। भोग्ने त भोग्ने नै भो। भोगाउनेहरुको मनमा ‘हरि जागे पो' केही हुन्थ्यो। पत्रकार हकहितका लागि खुलेको एकमात्र छाता संगठन नै निर्धाे र स्वार्थी बनेपछि पार्टी निकट संगठनलाई झन के चासो। पछिल्लो समयमा सबै भन्दा बढी विकास भएको भनिएको संचार। सबैभन्दा बढी सामन्त्ाी र नियमनहीन छ भन्दा केको अन्याय?
दशैं र रेमिट्यान्सको सम्बन्ध
राजु पौडेल, काठमाडाैँ, असोज ३० - त्यो समयमा कैयन सेवाग्राहीका गुनासा अनुभव गरेको छु, उनीहरुले भन्थे, ‘दाइ यो पैसा भएन भने मेरो परिवारको दशैं खल्लो हुन्छ’। हामीले गर्न सक्नेसम्मको काम गरेर दशैं खल्लो बन्न दिएनौं। यो समयमा रेमिट्यान्समा आश्रित नेपाली समुदायका धेरै पीडालाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएको छुँ।
सुखानीबाट खड्ग ओलीलाई चिठी
रोहित खतिवडा - खुदुनाबारीको पट्यारलाग्दो तेर्सो हिँडिरहेका बेला आफूजस्तै एक्लो बटुवा भेटेपछि बल्ल मेरो हिम्मत बढ्यो। तर के अचम्म! म जति फटाफट हिँड्थे, उनी उति छिटो पाइला चाल्थे। मानौं, मेरो पिछा छुटाउन खोज्दै छन्। उनको तेज गतिले लागेको थियो, दानाबारी नै जाने होलान्। सुखानी पो जाँदै रैछन्! बस्तीको नाममा एउटा झुपडी पनि नभएको त्यो जंगलमा के गर्न जानुपरेको होला यिनलाई? त्यसमाथि यो रातमा! यति हतारिँदै!
कुपन नम्बर ४००
ब्रजेश - सरकारले मंगलबार पेट्रोल बाँड्ने सूचना प्रकाशित गरेर उसमाथि ठूलो कल्याण गरेको थियो। यो जोशमा उसले साधारण हिसाब पनि भुलेको थियो। सात लाख मोटरसाइकल र एक लाख बीस हजार प्राइभेट गाडीमध्ये आधा मात्र लाइनमा लागे पनि कसरी सबैले पेट्रोल पाउलान् भन्ने कुरा उसको मथिंगलमा आएको थिएन। तर सन्देशलाई थाहा थियो, मंगलबार निकै लामो लाइन हुनेछ। जति बेर कुरेर भए पनि ऊ पाँच लिटर पेट्रोल भरेरै छाड्नेछ अनि त्यो पाँचै लिटर लगेर प्रतिष्ठाको स्कुटीमा खन्याइदिनेछ, मुटुभरिको माया खन्याए जसरी।
राष्ट्रपति सभाध्यक्ष तिक्तता, ‘इगो’ को भिडन्त
काठमाडौं भदाै ३० - संविधान जारी गर्ने तिथि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग परामर्शबिना एकतर्फ रुपमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सार्वजनिक गरेपछि यादव र नेम्वाङबीच ‘इगो’ को लडाइँ छरप्रष्ट भएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
निधारमा खत बनेको दशैँ
म लगबग १३ वर्षको थिएँ । हरेक वर्षझैँ दशैँ मनाउन काठमान्डौबाट आफ्नै गाँउ धादिङ गएको थिएँ।
वलि पशुको हैन, पाशविक प्रवृत्तिको
शिरीषबल्लभ प्रधान - हामीले आफ्ना खराव बानी, कुलत, गलत प्रवृत्तिलाई सदाको निम्ति छाड्ने प्रण गरेर दशैं मनाउन सकिन्छ। खराव प्रवृत्तिको वलि दिनसके स्वतः हामीमा असल विचार र असल भावना पलाउँदछ र हाम्रो जीवन सुखमय, समृध्दमय हुन्छ। दशैंमा हामी सुख, शान्ति र समृध्दिको कामना पनि गर्छौ। यदि त्यसलाई साकार तुल्याउने हो भने आसुरी र पाशविक प्रवृत्तिको वलि चढाउनै पर्छ हामीले।
टीका लगाए पनि हुन्छ, नलगाए पनि हुन्छ
शिव प्रकाश - दसैंको निहुँ नहुदो हो त परदेशिएको लाहुरे र विदेशिएको छोरो कहिले घर फर्कनु? देश–देशावरमा छरिएर रहेका हामीले हाम्रा परिवार र स्वजनलाई कहिले भेट्नु ? परायघर गएर सास्ती खाएकी चेलीले कहिले मुख फेर्नु ? दुईचार दिन भए पनि कहिले आराम पाउनु ? बुढा पहाड जस्ता तपस्वी बा–आमा, हजूरबा–हजूरआमाका टोलाएका धमिला आँखाले आफ्ना सन्तानको मुहार हेर्ने इच्छा कहिले पुरा गर्नु ? के यो सद्भावको सेतु हैन र दसैं ? के यो पारिवारिक सद्भावका पछाडि कथित धार्मिक र जातिय स्वार्थ छ ?
जिरो सेन्टिग्रेडमा जमेको मेरो अभागी खप्पर
दिल निशानी मगर - म जमिनतिर भासिन लागेको अभागी तथा उद्देलित टाउको उचालेर बोल्न त खोज्छु। अहँ, सक्दिन। मानौँ मेरो वाक्य जिरो डिग्री सेन्टीग्रेडमा जमेको छ। यस्तै हुँदो रहेछ निर्धा मानिसको टाउको। राणाजीसँग लडेर कांग्रेसले जनजनको जिब्रोमा वाक्य भरिदियो। 'वाक' अधिकारलाई कानुनमा लेख्यो तर पनि हाम्रा आवाजहरु बुलन्द भई निस्कन सकेका छैनन्। उहिलेदेखि अहिलेसम्म। एउटा अभागी 'टाउको' को बयान कुनै अदालतको कठघरा मा उभिएको निमुखा प्रतिवादीको जस्तै छैन र?
एक बाकस दशैं
ब्रबिमकुमार - सोह्र श्राद्धको एक साँझ ऊ फर्कियो कहिल्यै नफर्किने गरी आफ्नो अभागी जिन्दगीलाई बाकसमा बन्द गरेर गाउँ दशैंको कमेरोमा डुबिरहेको बेला ऊ, एउटा बाकसमा मस्त पल्टिएको थियो संसारकै ठूलो उसको आफ्नै बाटुलो आँगनमा र भनिरहेको थियो आफ्नी अर्धागिंनीलाई 'राम्रो सँग बसे, आमा र बच्चाको हेरविचार गरे आफ्नो ख्याल राखे।'
गाउँमा कसैले पिङ हाल्यो कि!
भानु पराजुली - गाउँमा केटाकेटीहरुमा त्यो जोस छैन रे, एसएलसी र प्लसटु सकेसी विदेशिन थालेकाले बुढाबुढी र केटाकेटीमात्र गाउँमा छन् रे, गाउँका खेतबारी बाँजै, बाँसघारीहरुले बोलाइरहन्छन् रे । सायद युवाउन्मूख र गाउँमुखी ग्रामीण दिगो विकासको आसमा मेरो गाउँ जस्तै हजारौं गाउँहरु पर्खिबसेका छन् ।
डा. राजु अधिकारी - पेटमा पुगेको मासु पच्न कम्तिमा पनि ९० घन्टा लाग्छ। तर दसैँका नाममा मांसहारी व्यक्ति दिनमै पटक–पटक मासु खान्छ। मासु खाएपछि हलचल, डुलघुम, व्यायाम–कसरत गरे कतै पच्न सजिलो हुन्थ्यो होला। मान्छे यसो गर्दैन, लासको सेवनपछि तासको सेवन सुरु गर्छ। तास–जुवा खेल्ने व्यक्ति त्यसै त रोगी हुन्छ किनकि दिसा–पिसाब रोकेर घन्टौँ कुँजिएर बस्नु उसको बाध्यता हो। माथिबाट तेलैतेलमा तारेको महागरिष्ठ मासु खाएर घन्टौँ बस्नेको हालत के होला?
दुर्गा भवानीको आराधना गर्दैमा धर्म हुने होइन
रवीन्द्र मिश्र - ‘तँ ठूलो भए, तँ ज्ञानी भए, तँ मानि भए, तँ धनि भए, तँलाई कहिले रोग नलागोस्, चन्द्रमा दाहिने हुन्’ आदि(इत्यादी मैले सुनि आएका आशिर्वादहरू हुन्। अहिले म यसो सोच्छु, यो समाज विग्रनु, यो संसार प्राविधिक र बौद्धिक ज्ञानको भण्डारका रुपमा विकशित भएर पनि यतिविघ्न अमानविय समस्याहरूबाट ग्रस्त हुनमा मूलरुपले बालबालिकाहरूलाई जुन ढंगबाट हुर्काइन्छ, बढाइन्छ र पढाइन्छ, त्यो नै जिम्मेवार छ। ... हाम्रो शास्त्रले नै लाभांशको दश प्रतिशत सत्कार्यमा खर्च गर्नु भन्छ। सत्कार्यसम्वन्धी त्यस्तो वाणीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने, साँझ/विहान मन्त्र जप्नुको के अर्थ र तिनलाई त पुजाबाट धर्म होइन, पाप लाग्छ
रेखाकुसुम रेग्मी - रेगन र रोहनलाई दशैँ सिकाउन दशैं मनाउनु छ मलाई। दशैं पढाउन दशैं मनाउनु छ मलाई। घटस्थापनाको दिन पहिलोपल्ट अक्षता र फूलले पूजा गर्न सिकाउँदा कति रमाएको थियो रेगन। अब उस्को खुसी देख्न पनि मनाइदिनु छ मैले दशैं। मामालाई चिनाउन पनि मनाइदिनु छ मैले अब। मेरो च्यात्तिएको खुसीमा उनीहरुका खुसीका रंगहरु मार्न पाउँदिन । रंगहीन दशैंमा खुसीका रंगहरु खोजिदिनुछ मैले अब।
काठमाडौँ, असोज १५ - प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्षअन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनमा मनाइने फूलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधिअनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याई मनाइँदैछ ।घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दसैँघर अथवा पूजाकोठामा शुभसाइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र अन्य नयाँ पालुवासमेत भित्र्याइन्छ ।
तीन दशकका तीन दसैँ दृश्य
रामकुमार एलन - तेस्रो दशक सम्झेँ । परिवर्तन भयो । युग फेरियो । मानिस फेरिए । अब एकजोर फलाटिनको सर्ट लगाउन दसैँ आउनु परेन । छोराले फेसबुकमा म्यासेज गर्छ । छोरीले भारतीय टेलिसिरियल हेरेर फेसनको कपडा आफैँ रोज्छे । वस बाबुसँग खल्तीमा छोराछोरी, पत्नीको रहर पूरा गर्ने कमाइ हुनुपर्छ । हिजो पैसा नभए केही छैन, आऊ दसैँमा घर भनेर रुन्थे मान्छे । अचेल तिमी घर किन आउनु, कमाइ गर्नुछ, परिवार पाल्नु छ भनेर समाज दिनप्रतिदिन विखण्डित हुँदैछ ।
छाप्रोमा नपसेको दशैं
केपी अनमोल - तँपाईको दशैं कति भड्किलो, हेर न ! छिमेकीको मन दुखाई रहेछौं । चाँड नि यसरी मनाउँछन र ? यसमा त, सबै खुसी हुनुपर्छ । जुम्लामा, चामल छैन, बाजुरा नुनै छैन , उनको पनि त दशै हो नि, फेरि अस्ति मात्रै, घरखेत बगाइ लग्यो, आफन...
चाडबाडका बेला खानामा गति नछाडौँ
देवेन्द्रप्रसाद सिटौला - आसन्न चाडवाडहरुमा सबैले हेक्का राखौँ– के के खाने, कति खाने, कतिपटक खाने? जिब्रोले स्वाद खोज्छ अनि पेट अघाउँदैन। त्यही हो तृष्णाको जड रुप र उदाहरण। अझ मांश–मदिरामा रुचि हुनेहरुलाई त झन यो तृष्णाले नराम्ररी लखेटछ, त्यसैले चाडबाडको बेला खानपिनमा होश जगाउनु सबैका लागि कल्याणदायी छ। साथै एकैनाशको आहार विहार सदा भए अति उत्तम। चाडवाडका वेला खानपानमा केही गति छाडे पनि स्वस्थ्य र साधना नविग्रने गरी रुचि जाग्नुपर्छ।
भत्किएको गाउँको सम्झनाको मेरो दशैं
महेन्द्र कँडेल - विगतका ती दिनहरु वर्तमानमा कथाका पानाहरुमा बदलिने रहेछन्। कुनै एउटा लक्ष्य बोकी छोडेको गाउँमा आज फर्किंदा उद्देश्यविहीनजस्तो लाग्ने रहेछ। त्यो १९ वर्षको अराजक नवयुवक गाउँबाट पलायन हुँदा त्यो मस्तिष्क पटलमा अग्निकुण्डका ज्वालाहरु खिचातानी गर्थे। त्यो उमेर नै त्यस्तो थियो। जतिबेला नौला कुरा मात्र मन पर्थे, पुराना सबै बेकार लाग्थे।
गजेन्द्र बोहरा - फेरि दशैं सुरु भएको छ, मलाई भने फेरि अतितका स्मृतिले सताउन थालेका छन् । दशैंसँग मेरा अनेक दुःखका कथा जोडिएका छन्, त्यसैले लाग्छ यो दशैं नै मनाउँदिन । तर समाज छ, श्रीमती, छोरा । यी सबलाई नाघेर जान पनि सक्दिनँ । त्यसैले जव पर्व सुरु हुन्छन्, मौसम पनि खुसीयाली लिएर आउँछ, मेरा लागि आँशुको वर्षा ।
दसैँ र चंगा
श्रीकमल द्विवेदी - हामी सानो छँदा दसैँको आएको संकेत आकाशमा उड्ने चंगाहरुले दिन्थे। भदौ महिनाबाटै आकासमा चंगा देखिन्थे। हाम्री हजुरआमा भन्ने गर्नु हुन्थ्यो, चंगा उडाउनु भनेको ईन्द्रलाई पानी पुग्यो अब भनेर पठाउने सन्देश हो रे । त्यसैले धानमा गेडा नपस्दै चंगा उडायो भने किसानहरु रिसाउँथे रे।